Etu a ga-esi chụwa Di gị na-adịghị aghụghọ, na Ezigbo nwunye na GPS | Ngwọta OMG
Igwe eji akpo oku mberede, igwe onyunyo uwe ojii, GPS Tracking & Bed Exit Padla, ihe nlere nzuzo igwefoto zoro ezo - ulo & ulo ogwu
Etu a ga-esi egwu GPS Ihọd na-ekwesịghị ntụkwasị obi
Di gị ma ọ bụ nwunye gị ọ̀ na-aghọgbu gị? Ọ dị gị ka ịchọrọ ihe akaebe? Ikwesiri idobe track iji kpochapu obi abua? Ọ dị mma, ọ bụghị ihe jọgburu onwe ya ma ọ bụrụ na obi esighi gị ike banyere di gị ma ọ bụ nwunye gị, ha gaara enye gị otu ihe ma ọ bụ karịa iji mee ka ị chee na ha ga-aghọ aghụghọ ma ọ bụ ịhụ onye ọzọ. Ọ bụrụ n ’ị na-enyo di gị ma ọ bụ nwunye gị na-ekwesịghị ntụkwasị obi na ikwesiri igosipụta obi abụọ gị, iji GPS Tracker kwesịrị ịbụ nhọrọ ikpeazụ. E nwere ọtụtụ ihe gbasara ụkpụrụ omume metụtara ịmara ọnụ yana ihe ọghọm nke ijide ya na nsogbu ndị nwere ike ibilite.
Ọ bụrụ na gafere ihe niile gbasara ụkpụrụ na nsogbu nke nsogbu nwere ike ibilite, ị ka nwere afọ ojuju ịga n'ihu. Họrọ ngwaọrụ GPS kacha mma maka gị; Inwere ike ịzụta ngwaọrụ eji arụ ọrụ, ihe ndekọ GPS, ekwentị akara ma ọ bụ ọbụnadị akara. Ngwa ngwaọrụ nsuso abịa ugbu a n'ụdị dịgasị iche na nha nwere ike isite na nnata nke nwere akpa, rue ndị pere mpe nwere ike itinye aka na ekwentị ma ọ bụ igwe aka. Imirikiti GPS na-etinyekarị n'ụgbọala iji soro ebe ọ nọ na ọnọdụ ọ na-aga site n'oge ruo n'oge. Imirikiti sistemụ GPS na-enye ohere nsuso oge na-abụkarị site na mpaghara ndị dịpụrụ adịpụ, a na-emelite 2 ọ bụla na sekọnd 5 na ekwentị / kọmpụta eji eme ihe. Na mgbakwunye na nyocha oge, enwere ndekọ echekwara iji kọwaa akụkọ njem na ebe aga eleta ọtụtụ. Ngwaọrụ nsuso GPS na-abụkarị ọnụ ala, dịkwa ọnụ ala ma dịkwa mfe ịwụnye na iji. Mmezi dịkwa mma nke ukwuu.
Otutu ndi mmadu kwenyere na achoro iji ndi nyocha eme nke onwe ka ha soro onye di ya bu aghụghọ na-acho, nke a bu 21st narị afọ na teknụzụ dị ukwuu. Dokwesighi iku onye nchoputa ihe ruru puku dọla naanị ka o wee rụọ ọrụ dị ka nke a, nwee sọsọ na-eji satelaiti agha ịchọta ọnọdụ. Wayzọ a ị na-echekwa ego na ịdị na-ahụ maka nyocha gị.
GPSdị GPS bụ:
Ihe ndekọ GPS
Sistemụ igwe ụwa (GPS)
GPS logger bụ ụdị GPS akụkọ ihe mere eme, ọ bụ naanị na - edekọ ozi na ebe a na-echekwa echekwa n'otu ọnọdụ nchekwa. Site n’ebe a enwere ike ilele ya na ozi dịka ndekọ ndekọ ọnọdụ, oge eleta, ọsọ na-agba ma emesịa nọrọ na ọnọdụ a. Ọ bụrụ na ị bụ ụdị ga-amasị ịmara ebe onye gị na ya na-etinye ihe ka ukwuu oge ha, ngwaọrụ a ga-abụrịrịrịrịrịrịrịrịrịrị maka gị. Ọ bụkwa ezigbo ọrụ bara uru iji nyochaa na di gị ma ọ bụ nwunye gị na-ekwu eziokwu banyere ebe ha dị mgbe a jụrụ ha. Mgbe nwunye ị na-enyo enyo na ọ bụ onye ekweghị ekwe nọ n'otu ebe dị ka ụlọ ndina, ebe a na-eri nri, ụlọ nri ma ọ bụ ikekwe n'ụlọ onye ọzọ. Ga - enwe ike ịkọ ebe ọ bụ na ọnọdụ ha, onye ọchọla a ga - egosipụta, ga - egosipụta na ngwaọrụ nchekwa gị. Ngwaọrụ a na-pere mpe pere mpe ma na-arụkwa ọrụ ya nke ọma.
Nwere ike tinye ngwa ije n'ime ma ọ bụ n'ụgbọ nwunye gị, nke a nwere ike ịdabere n'ụdị ndị ahịa ahụ. Mgbe ị dị njikere ibudata ozi ndekọ gị, ịnwere ike iwepụ ya n'ụgbọala ahụ jikọọ ya na ọdụ ụgbọ mmiri PC PC gị wee budata ozi ahụ. Ozugbo emere nke a, ị nwere ike ịlele ndekọ ahụ na satịlaịtị ma ọ bụ na eserese nke ọ bụla nwere ike ịgagharị, ọ nwere ike ịdị n'ụdị ederede. Ozugbo enwetara ozi a, ịnwere ike gbaa ya ọkụ ma ọ bụ diski ma ị nwere ike gosipụta ozi ya n'oge.
GPS ezigbo oge bụ akụkụ ya niile nke na-atọ ụtọ, ya na teknụzụ a enweghị ọrụ. Nwere ike soro n’agha, ọ na-adị ọnụ ọnụ ma chọọ ọtụtụ mmezi yana nka mana ọ na-arụ ọrụ ahụ nke ọma. Ọ na-eji ngwanrọ na-arụ ọrụ web na-ejikọ na teknụzụ GPS, na nke a ị na-emelite ọhụụ dabere na ntanetị niile na-aga n'ihu bụ site na ịntanetị na ekwentị ma ọ bụ kọmputa. Oge dị anya na-enye gị ohere ihu onye zoro ebe ọ bụla ha nọ ugbu a. Iji maa atụ, mgbe onye ọkpụkpọ gbanyere ma ị na-elele ugbu a, ịnwere ike ịkpọ di gị ma ọ bụ nwunye gị iji nyochaa ọnọdụ ha. Enwere ike iji nke a kpochapụ obi abụọ gị, ha nwere ike ịgha ụgha; nke a ga - emekwu enyo gị ma ọ bụ nwee ike ịkwụwa aka ọtọ ma gosipụta ọnọdụ ha, nke a na - ebelata enyo ma mee ka ntụkwasị obi dịkwuo elu. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike bụrụ nkwenye ị na-echegbu onwe gị n’enweghị ihe kpatara ya, di gị ma ọ bụ nwunye gị agaghị eso nwoke ọzọ nọkọọ dịka i chere.
Could nwere ike banye mgbe di gị ma ọ bụ nwunye gị gwa gị na ha ga na-arụ ọrụ n’abali a, nke a ga - enyere gị aka ịmata ebe ha ga - anọ ma ọ bụrụ na ọ ga - abụ ebe ha kwuru ka ọ dị na ebe ha kwuru. Nke a nwere ike ịbara gị uru ma ị chọọ ijide ya ma ọ bụ mee ihe ngosi.
Maka ezigbo oge GPS dị ugbu a, ọ dị gị mkpa ịmara eziokwu na ha na-esokarị ụgwọ ndenye aha kwa ọnwa. Alsofọdụ kwụpụkwara ụgwọ mmezi ụfọdụ, ego a zuru oke nwere ike ịdị site na $ 20 gaa $ 70 kwa ọnwa. Unitsfọdụ nkeji nwere ike izitere gị ọnọdụ nke ọnọdụ ahụ site na ozi ederede mana n'oge a, nke a adịghị mkpa ebe ọ bụ na ọtụtụ ekwentị nwere ike ịnweta naanị map ahụ ma nye gị ozi achọrọ.
Ebe di omimi itinye GPS trackers na ugbo ala
Ọ dị mkpa itinye mpaghara GPS na mpaghara ọ ga-enwe ike ịgwa ya na satịlaịtị, itinye ya n'ọnọdụ dị ezigbo mkpa ma dịkwa mkpa. N'okpuru ebe a, ndepụta ndepụta ebe enwere ike itinye ya na ụgbọ:
N'ime paịlị rọba
N'okpuru ọta ahụhụ
Oghere dị n'etiti windo na hundu
N'okpuru azụ azụ azụ / breeki nke atọ
N'ime oghere mgbochi nke rọba
N'ime igbe aka
N'azụ oche ma ọ bụ n'ihu oche
Nzuzo 2353 26 Echiche Taa
Ngwọta OMG - Enyemaka Singapore 500 Enterprise 2018 / 2019
Họrọ uruIgwe na-eyi igwefotoMkpuGPS TrackerNledo IgwefotoNyocha Voice Recorderndị ọzọ na-
Onwa Sat: 11am-5pm
Copyright 2011, OMG Consulting Pte Ltd Haziri Site	OMG Solutions Pte Ltd